Maxkamadda ugu sarraysa Maraykanka ayaa go’aamisay in si dhamaystiran loo hirgaliyo mamnuucitaankii uu madaxweyne Trump ku soo rogay lix dal oo Muslimiin ah. Go’aankaasi oo wajihi kara caqabado dhanka sharciga ah. Go’aankan ayaa xoojinaya siyaasaddii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahayd Chad, Iiraan, Liibiiya, Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen. Xukunkan wuxuu ku fulayaa go’aanka markii saddexaad […]
December 5, 2017Comments Off on Maxkamadda Ugu Saraysa Maraykanka Oo Taageertay Xayiraaddii Socdaalka Ee Trump.Read More
Ilowareedyo aanu ka helayno xarumaha maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa tibaaxaya in gaadhigii badhasaabka si sharcidaro ah wakhtiga kalaguurka ay u kala iibsadeen badhasaabka gobolka Awdal iyo maayerka Borama. Wararka ayaa sheegaya in baabuurkan oo uu soo celiyay badhasaabkiii hore ee gobolka Awdal ee Ramaax . Baabuurkan ayaa qadarka lacagta ah ee lagaga iibiyay […]
December 2, 2017Comments Off on Badhasaabka gobolka Awdal iyo Maayerka Borama Ma Waxa ay ku heshiiyeen hantidii qaranka wakhtiga kala guurka Diirada Lughaya.comRead More
Kumishanka Doorashooyinka Qaranka Oo ku Dhawaaqay Waqtiga ay ka Bilaabi doonto Gobolka Awdal
Borama Lughaya.com- Kumishanka Doorashooyinka ayaa maanta shaaciyay in gabi ahaanba way soo dhamaatay qaybinta kaadhadhkii codbixinta ee gobolka Awdal ka bilaabantay
May 22, 2017Comments Off on Kumishanka Doorashooyinka Qaranka Oo ku Dhawaaqay Waqtiga ay ka Bilaabi doonto Gobolka AwdalRead More